Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » Fanadihadiana: Ny ampahatelon'ny Amerikanina irery no matory tsara kokoa any amin'ny hotely
shopcouryard innerspring kidoro boaty lohataona set cym 124 sim2 lrg
Rehefa amerikana an-tapitrisany no mandeha miala sasatra amin'ity fahavaratra ity mitady fialan-tsasatra sy fialan-tsasatra, dia azo inoana fa ny roa ampahatelony amin'izy ireo dia tsy hatory toy ny any an-trano.
Araka ny fanadihadiana iray vaovao nataon'ny mpandeha am-pandriana DUX, ny ampahatelony (34%) amerikana ihany no milaza fa matory tsara kokoa ao amin'ny efitranon'ny hotely. Ny fanadihadiana dia notontosaina tamin'ny alàlan'ny The Harris Poll ho an'ny DUX avy amin'ny Jona 18-20, 2019, amin'ireo olon-dehibe amerikana 2,060.
"Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mieritreritra akory ny hanontany hoe inona no karazana fandriana ampiasain'ny hotely ary raha mahazo aina mihitsy izy ireo," hoy izy Ed Curry, filohan'ny DUX Amerika Avaratra. "Ny zavatra, raha misy trano fandraisam-bahiny manome fandriana tena tsara, dia handeha lavitra amin'ny fiantohana fa haka aina tsara ianao ary vonona ny hanao vakansy."
Ho an'ireo mpandeha manantena fatoriana hotely misy kalitao, matetika no mahakivy ny zavatra hitany. Ny fanadihadiana dia nahatsikaritra fa na dia ny 61% amin'ireo Amerikanina aza dia manantena ny kidoro trano fandraisam-bahiny ho milamina kokoa noho ilay ao an-trano, dia tsy izany no izy. Enina amby dimampolo isan-jato no nilaza fa ny ankamaroan'ny kidoro amin'ny hotely ipetrahan'izy ireo dia tsy mahazo aina loatra.
Sahabo ho 43% -n'ny Amerikanina ihany no mitady hotely ahitana kidoro specialty na rendrarendra, hoy ny fanadihadiana. Mahamenatra izany satria ny hack hack iray mora manatsara ny fialan-tsasatrao dia ny manontany hotely tsotra hoe inona ny karazana fandriana ampiasainy.
"Sarotra ny mankafy ny fialan-tsasatrao rehefa tsy matory tsara ianao," hoy i Curry. “Ka araho miaraka amin'ny fanarahana toro-hevitra torimaso hafa, toy ny fampangatsiahana ny efitrano sy fametraham-pialana ny teknolojia, andramo ny mahita hotely mifantoka amin'ny torimaso amin'ny alàlan'ny kidoro, lamba sy ondana avo lenta.”